Guddoomiyaha Cayayaanka wuxuu baaray shaqooyinka Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaGuddoomiyaha Cayayaanka wuxuu baaray shaqooyinka Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad
22 / 05 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
madaxweynaha bocek wuxuu bartay daraasadaha nidaamka tareenka
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Muhittin Böcek wuxuu baaray howlaha kaabayaasha ee Meltem Boulevard iyadoo laga duulayo Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad. Helitaanka macluumaadka ku saabsan daraasadaha socda, Duqa Magaalada Böcek wuxuu sheegay in shaqooyinka ka socda marxaladda Meltem lagu dhammeyn doono 2 bilood gudahood.
Shaqadu waxay kusii soconayaan Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Masjidka 3-aad ee Magaalo Weynta Magaalada, kaas oo Varsak ugu xiri doona bartamaha magaalada Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista. Ka dib markii isgoyska dabaqa ee Dumlupınar Boulevard la geeyay, waxaa sii socota howlihii ay ka bilaabeen marxaladda Tababarka iyo Isbitaalka Meltem-Antalya. Kaabayaasha iyo barakaca waxaa lagu fuliyaa marxaladda Meltem. Duqa Degmooyinka Magaalada Muhittin Böcek wuxuu warbixin ka helay saraakiisha shirkada qandaraaslaha ayagoo baaraya shaqooyinka kaabayaasha goobta ee Nidaamka Tareenka 3aad inta lagu gudajiro heerka Meltem. Madaxweyne Insect wuxuu shaaca ka qaaday in shaqada masraxa Meltem lagu dhamayn doono 2 bilood gudahood.
560 MILLION TL FADLAN MACLUUMAAD
Duqa magaalada Böcek wuxuu sheegay in shaqooyinka dawlada hoose ee magaaladu ay kusii soconayso xaafadaha 19 ee Antalya 913 degmo, Duqa magaalada Böcek wuxuu sheegay in waxyaabaha soo socdaa ay ka shaqeeyaan Meltem Mahallesi. Waxaa ku yaal garoon dhinac ah iyo Isbitaalka tababarka Antalya iyo Isbitaalka dhanka kale. Ilaa maalintii aan xafiiska la wareegi jirnay, waxaan sii wadnay shaqadeena Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad laga bilaabo Kepez ilaa iyo hadda. Waxaan ku bixinay 560 milyan TL illaa iyo haatan. ”
FARSAMADA FARSAMADA 7 JUNE
Duqa magaalada Böcek ayaa sheegay in isgoyska, oo ah mid muhiim u ah jaamacada Akdeniz, la furi doono 7da bisha June wuxuuna yiri, “Waxaan dhisnay xad dhaafka. Waxaan dhameystireynaa isgoyska 7-da Juun. Waxaan rajeyneynaa inaan dhameysano qeybta ilaa iyo tababarka Antalya Training and Research Hospital 2 bilood gudahood. Dhanka kale, Meltem, oo sidoo kale ah midda xaafadaha ugu waaweyn ee Antalya, waxaan dib u cusbooneysiinay labada bulaacadaha iyo qiimaha biyaha fursadan. ”
Raali galinta Muwaadinka
Isagoo u mahadceliyey shirkadda qandaraasleyaasha iyo shaqaalaha, ayuu Madaxweyne Böcek yiri, “Dabcan, waxaan dhibaatooyin ku qabnaa hawlahan adag ee masiibada ah. Waxaan si dhakhso leh u sameyneynaa waxa loo baahan yahay in halkan lagu sameeyo si looga hortago caqabad kasta. Waxaan carqaladeynay shacabkeena. Waxaan ka raali gelinaynaa muwaadiniinteenna dhibaatadan. Haddii adeegyadan aan la bixin, uma imaan karno Isbitaalka Tababarka iyo Cilmi baarista Antalya. Muwaadiniintayada Kepez, oo ah degmada ugu weyn ee Antalya, waxay imaan doonaan Isbitaalkayaga Tababarka iyo Cilmi baarista Antalya oo leh nidaam tareen.
WAXAA LAGA BIXIYO DHAMAADKA SANADEED
Isagoo carabka ku adkeeyay in Saldhigga Tareenka oo ku yaal albaabka laga soo galo baska uu 28 mitir ka hooseeyo, Duqa magaalada Böcek wuxuu caddeeyey in marxaladda Baska lagu dhammeyn doono 6 bilood gudahood muwaadiniintuna ay gaari doonaan saldhigga basaska oo leh tareen fudud oo ka yimaada gobol kasta. Isagoo ku nuuxnuuxsadey in howlaha ka socda Duqa Magaalada Insect Meltem ay dhamaan doonaan dhamaadka sanadkan, wuxuu sheegay in shirkada qandaraaslaha ay sii wadato shaqeynta habeen iyo maalinba tan.
Baadhitaanka ka dib, Madaxweyne Insect wuxuu booqday ilaaliyayaasha tagaasida Meltem Boulevard oo uu la sheekaystay. Madaxweyne Böcek ayaa sidoo kale u dabaaldegay Ciidda Ramadaanka ee Dukaanleyda.
Duqa Duqa Buundar wuxuu baaray asfaltii goobta goobta
Madaxweyne Turel, 4 Xaafadda 3. Mashruuca Nidaamka Isgoyska Wajiga
Nidaamka tareenka fudud wuxuu ka bilaabmay Gaziantep 2. Daraasaadka Sahaminta Taraafikada Qalalaasaha.
Antalya 3. Nidaamka Isbedbedalka Marxaladaha Isku-duubka Habeenkii ayaa la abuuri doonaa
Madaxweynaha Turkiga oo tijaabinaya Daraasadaha Tunniga ee Eurasian
Madaxwaynaha Kayda Asfalt ee Sahannada ee Site
Madaxweyne Saraoge, Xarunta Dhaqaalaha ee Muratdağı